Akhriso:-Taariikh Nololeedkii Iyo Doorkii Siyaasadeed Ee AHUN Eng Yariisoow. AwdalMedia Awdal Media Akhriso:-Taariikh Nololeedkii Iyo Doorkii Siyaasadeed Ee AHUN Eng Yariisoow.
Akhriso:-Taariikh Nololeedkii Iyo Doorkii Siyaasadeed Ee AHUN Eng Yariisoow.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo Duqii Muqdisho Alle ha u naxariisteen Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow waxaa uu siyaasada dalka ku soo jiray si toos ah laga soo bilaabo 2006dii, waxaana uu ku noolaa waqtigaa magaalada London ee dalka Britain.
Markii uu jaamacadda dhammeeyay illaa sannadkii wuxuu ka shaqeeyay Wasaaraddii howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaraddii Maaliyadda oo uu u ahaa Injineer iyo maamule mashaariic.
Shaqooyinkii uu soo qabtay
Waxa uu noqday Madaxa Xafiiska Xafiiska Ra’isulwasaaraha Dowladdii KMGka aheyd intii u dhaxeysay October 2008 ilaa February 2009
Waxa uu ifka uga tagay 7 carruur ah (2 wiil iyo 5 gabdhood, maanta oo ay taariikhdu tahay 01 August 2019 ayuuna ku geeriyooday magaalada Doha ee Dalka Qatar.
Odayaasha Laascaanood Oo Lacag Badan Ugu Deeqay W/Hawlaha Guud Ee Master-balanka ka Wada..
Khayre Oo Si Murug Leh Uga Hadlay Geerida Eng. Yariisaw.